‘मेयरको टिकट पाए पनि उठ्दिन’ « Loktantrapost
‘मेयरको टिकट पाए पनि उठ्दिन’
३० चैत्र २०७३, बुधबार ०९:३३
मेचीनगर । चुनावी रन्कोले छोइसकेको यतिबेला राजनीतिमा लागेका कसलाई उम्मेद्वार बन्न मन नलागेको होला र ! अधिकांश नेताहरु आउँदो स्थानीय तहको चुनावमा पार्टीबाट जसरी भए पनि उम्मेद्वारको टिकट हात पार्ने प्रयासमा छन् । यसका लागि उनीहरु पार्टीका बैठक, भेला र छलफलहरुमा नबिराई उपस्थिति जनाउने पनि गरेका छन् । ताकि सबैले उम्मेद्वार जस्तो देखुन् र भनुन् ।
तर मेचीनगर–७ प्यारीभिट्टाका आदिवासी नेता बन्धन मुण्डा यसपालीको चुनावमा कतै पनि उम्मेद्वार नबन्ने सोचाइमा प्रस्ट छन् । नेकपा एमालेका नेता उनी पार्टीको बैठक र भेलामा जान्छन् । साथीहरुको आग्रह सुन्छन्, तर चुनावमा नउठ्ने जवाफ फर्काउँछन् । ‘मेयरको टिकट पाए पनि उठ्दिन’–उनी भन्छन् ।
‘चुनाव लाग्दै नलागेको भन्ने होइन’, चुनावमा उम्मेद्वारी नदिने विषयमा प्रस्ट पार्दै लोकतन्त्र पोस्टसँगको कुराकानीमा उनी भन्छन्–‘नेता हो, उम्मेद्वार बन्ला भनेर सोध्न आउनु भएको होला । माफ गर्नुहोस् म कुनै पदमा पनि उम्मेद्वार बन्ने छैन ।’
लामो कुराकानीका क्रममा उनीभित्र उम्मेद्वार बन्ने कुनै रहर पाइएन । चुनावमा यसपाली अरु नै साथीहरुलाई अवसर प्रदान गर्ने आफ्नो सोच भएको उनले बताए । भने–‘नयाँ साथीहरुलाई अवसर दिनु पर्छ ।’
२०३६ सालदेखि विद्यार्थी आन्दोलनमार्फत कम्युनिष्ट राजनीतिमा होमिएका बन्धन मुण्डा २०४६ सालसम्म आइपुग्दा तत्कालीन नेकपा मालेका परिपक्व कार्यकर्ता भइसकेका थिए । भूमिगत राजनीति गर्न सिपालु उनलाई चिया र यातायात मजदुरको सेक्टरमा राजनीतिक सङ्गठन गर्न पार्टीले खटाउँथ्यो ।
क्रान्तिकारी आदर्शमा कटिबद्ध उनलाई नेकपा एमालेले २०४९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा तत्कालीन काँकरभिट्टा गाउँ विकास समितिको उपाध्यक्षमा उम्मेद्वार बनाएको थियो । चुनाव जितेर उनले २०५४ सालसम्म जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी सम्हाले ।
साद्री भाषीको प्रतिनिधि नेताको रुपमा उनले जनप्रतिनिधि हँदा प्रखर वक्ता र गरीव वर्गका जनसमुदायको हित गर्ने लोकप्रिय नेताको छवि निर्माण गरे । पार्टीले उनलाई अर्को चुनावमा जिल्ला विकास समितिको सदस्य निर्वाचित गरायो । उनको राजनीतिक यात्रा अघि बढ्दै थियो । तर लामो समयसम्म मुलुकमा स्थानीय चुनाव नै नहुँदा उनले आफ्नो अविराम जनप्रतिनिधिको यात्रामा विराम लगाउन बाध्य हुनु पर्यो ।
नेकपा एमालेमा विगत १५ वर्षदेखि जिल्ला कमिटी सदस्य रहेका उनी साद्री भाषी समुदायभित्रका औलामा गन्न सकिने शिक्षित र राजनीतिक उचाइ अग्लो बनाएका एक मात्र नेता हुन् । लामो समयपछि स्थानीय तहको चुनाव हुँदा उनलाई आदिवासी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने मेयरको रुपमा देख्न चाहने जनसमुदायको सङ्ख्या धेरै छ । तर उनी चुनावमा नउठ्ने बताउँछन् ।
स्थानीय तहको चुनाव हुने चर्चा सुरु हुँदै गर्दा उनलाई नेकपा एमालेबाट मेचीनगर नगरपालिकाको मेयरको सशक्त उम्मेद्वारको रुपमा आँकलन गरिएको थियो । हुन त यस अघिको संविधानसभाको चुनावमा समानुपातिक तर्फ सांसद पदको उम्मेद्वार बनेका उनलाई संविधान निर्माणका लागि पार्टीले चयन गर्ला भन्ने पनि धेरै सम्भावना थियो । त्यहाँ पनि उनी चुनिएनन् ।
आखिर किन अहिले चुनावमा उनी उम्मेद्वार नबनेका होलान् ? उनीसँग सरल जवाफ छ । जवाफका लागि उनको प्रश्न छ–‘सँधैभरि मैले मात्रै अवसर पाउनु पर्छ भन्ने छ र ?’
उनले नगरको कुनै पनि पदमा उम्मेद्वार नबन्ने दाहोर्याउँदै पार्टीले अवसर दिए भविष्यमा जहाँ जुनसुकै जिम्मेवारी दिए पनि जाने बताएका छन् । ‘पार्टीलाई जहाँ मेरो आवश्यकता पर्छ, म त्यही जाने हो’, उनले सुनाए–‘नगरपालिकामा नै मरिहत्ते गर्नु पर्छ भन्ने छैन नि ।’
नेताको चाप्लुसी गर्दा उम्मेद्वारको टिकट पाइने कुरामा आफ्नो विश्वास नभएको उल्लेख गर्दै आफुले कहिल्यै पनि पदका लागि मरिहत्ते नगरेको बताए ।